दाङमा कोरोनाको सुचना पाउन समस्या, नउठ्ने रजिष्टारको ९८४१३२८४७२ फोन ! « Tulsipur Khabar
दाङमा कोरोनाको सुचना पाउन समस्या, नउठ्ने रजिष्टारको ९८४१३२८४७२ फोन !
दाङ, १ असार ।
विश्वभर माहामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको संक्रमण नेपालमा पनि तिव्र गतिमा बढ्दै गएको छ ।पछिल्नो समयमा नेपालमा घण्टाघण्टामा संक्रमित थपिदै जाँदा नागरिक त्रसित छन् । दिनप्रतिदिन संक्रमित थपिदा कहाँ कति जनालाई संक्रमण देखीयो भन्ने आम नागरिकको चासोको विषय बनेको छ । संक्रमणकै कारण हाल सम्म १९ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने संक्रमणको संख्या पनि झन्डै छ हजार नजिक पुगेको छ ।दाङमा मात्रै आईतवार सम्म संक्रमितको संख्या १४३ पुगेको छ ।
यस्तो अवस्थामा दाङमा कोरोना परिक्षण गर्ने एक मात्र हस्पिटल राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही रहेको छ । तर कोरोना परिक्षणको नतिजाको सुचना व्यवहारिक तथा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रतिष्ठानले हरेक दिन चार बजे प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्ने समय निर्धारण गरेपनि तोकेको समयमा कहिल्यै सुचना प्रवाह भएको पाईदैन । प्रतिष्ठानले आफनो फेसबुक पेज Rapti Academy Of Health Sciences मा तोकेको भन्दा डेढ ÷दुई घण्टा ढिलो पोष्ट गदै आएको छ । प्रतिष्ठानले पोष्ट गर्नु भन्दा दुई÷तिन घण्टा अगाबै प्रतिष्ठानबाट सुचना चुहावट अर्थात परिक्षणको नतिजा प्रवाह भईसकेको हुन्छ । यस्तै प्रतिष्ठानको अर्को फेसबुक Rapti Academy of Health Sciences – RAHS पनि रहेको छ ।
यद्यपी प्राय कोरोना परिक्षण नतिजा प्रतिष्ठानले सार्वजनिक नहुदै सुचना प्रवाह भईसकेको हुन्छ । जुन विवरण तथ्यपरक भन्दा पनि अस्पष्ट र अपुष्ट भएको पाईन्छ । ती अस्पष्ट कसले र कसरी सुचना प्रवाह गर्छ अर्थात प्रेस विज्ञप्ती सार्वजनिक हुनु भन्दा अगाबै गोप्य सुचना प्रवाह हुदा प्रतिष्ठानमा एउटा स्रोत नै तयार भएको आंसका उत्पन्न भएको छ । प्रतिष्ठानका कायममुकाय रजिष्ट्रार कैलाश प्रसाद देवको मोवाएल नम्वर ९८४१३२८४७२ मा जुनसुकै समयमा जति पटक फोन गरेपनि फोन रिसिभ हुदैन ।
यस्तै प्रतिष्ठानकोे सुचना अधिकारीको ९८५७८४९००० नम्वर पनि सम्पर्क गर्दा फोन उठ्दैन । यसरी प्रतिष्ठानले समयमै प्रभावकारी सुचना नदिदा कतिपय तथ्याङक गलत सम्पे्रषण भएका छन् । आईतबार मात्रैको कुरा गर्ने हो भने प्रतिष्ठानले विज्ञप्ती झण्डै पौने ६ बजे सार्वजनिक गरेको छ । उसले जारी गरेको विज्ञप्तीमा दाङमा आईतवार मात्रै ४७ जना र अन्य प्युठानका ९ जना गरी जम्मा ५६ जना कोरोना संक्रमण पुुष्टि भएको छ ।
तर सुचना दिउँसो तिन बजेतिर प्रवाह भईसकेको थियो । जुन सुचना अधिकांस अनलाईनमा प्रकाशित भएका विवरणले अन्यौलता गराएको थियो ।प्रकाशित सुचनामा दाङमा एकै दिन ५६ जना कोरोना संक्रमित भेटिए भन्ने थियो तर कहाँ कति भन्ने प्रष्ट थिएन भने हाल सम्म जिल्लामा संक्रमितको संख्या १ सय ५६ पुगेको भन्ने सुचना सम्प्रेषण भएको छ । त्यो कुरा सत्य नभएको पाईएको छ ।यसो हुदा एकद्धार प्रणालीबाट सुचना सम्प्रेषण नहुनु र प्रतिष्ठानले समयमै सुचना प्रवाह नगर्नु जस्ता लारवाही कुराले नागरिक सामु गलत सुचना प्रवाह भईरहेको कतिपय विवरणले बताउँछ ।नागरिकले पाउनु पर्ने बास्तविक सुचना पाउन सकेका छैनन् ।
आन्तरिक रुपमा सुचना चुहावट गर्नु हुदैन
यता स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख सुनिता पौडेलले यस विषयमा प्रतिष्ठान संग कुराकानी भईरहेको बताएकी छिन् ।आफुहरुले जिल्ला भरको कोरोना,क्वारेन्टाईन बारेमा कोभिड १९ को फोकल पर्सन कमल चन्दलाई तोकेको बताउदै उनले प्रतिष्ठानले आफुहरुलाई आधिकारिक रुपमा विवरण पठाएपछि मात्रै सुचना सम्प्रेषण गर्ने गरेको बताएकी छिन् ।
साथै उनले प्रतिष्ठानले प्रेस विज्ञप्ती जारी नगदै आन्तरिक रुपमा सुचना चुहावट गरेको बारे कुरा गरेको बताउदै यस विषयमा प्रतिष्ठान त्यसो नगरेको र गरेको भए कर्मचारीको पहिचान गरी कारवाही गर्ने प्रतिक्रिया दिएको उनको भनाई छ । प्रतिष्ठान संग समन्वय गरी एकद्धार प्रणालीबाट सुचना सम्प्रेषण गर्ने तयारी भईरहेको पनि उनले बताएकी छिन् ।